PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-11-04 - UBENNI NESIFISO SOKUPHINDA I-UEFA
UBENNI NESIFISO SOKUPHINDA I-UEFA
UVEZA isifiso sakhe ubenni Mccarthy ongumqeqeshi wecape Town City osanda kuqopha umlando ebholeni lakuleli ehlabana ngeziqu zokuqeqesha ZE-UEFA Pro License.
Lezi ziqu zisho ukuthi usengaqeqesha noma yikuliphi izwe emhlabeni. Umccarthy, osanda kunqoba inkomishi yakhe yokuqala engumqeqeshi ozimele ezakhe ziqukula IMTN8 zihlula isuperSport United, uthi iphupho lakhe wukuzibona ngelinye ilanga equkula inkomishi ye-uefa Champions League esengumqeqeshi.
Lesi sicoco umccarthy uke wasinqoba esadlala kwifc Porto yaseportugal ngo-2004.
“Ngiyazi ukuthi kwabanye abantu lesi sifiso sami basibona kuzokuba nzima ukuthi sifezeke kodwa-ke mina ngiyakholwa wukuthi singafezeka. Akekho obezitshela ukuthi kukhona umdlali eningizimu Afrika onganqoba indondo yechampions League kodwa ngakwenza lokho nefc Porto.
“Namanje ngiyasho ukuthi lokhu kuzokwenzeka yinqobo nje uma ngingeke ngixhamazele. Okwamanje kusafanele ngiqale ngifunde lukhulu lapha eligini yethu luze luvuthwe kahle ukhakhayi lwami, kuyima ngiqala ngiyongenisa e-europe. Yibhola leli likubeka emazweni ongakaze uphuphe ngokuya kuwona,” kusho umccarthy.